Jabra Elite 75t, falanqaynta shey aad u wareegsan | War gadget
Miguel Hernández | 27/03/2021 15:00 | qalabka, Reviews
Seguimos falanqaynta alaabada maqalka, gaar ahaan dhagaha TWS noocyada kala duwanaanshaha noocyada kala duwan si ay kuugu soo bandhigaan waxyaabo kale oo miiska saaran isla markaana kuu fududeynaya xulashada wax soo saar ku habboon baahiyahaaga iyo dhaqaalahaagaba, iyo sida ay wax u kala horreeyaan, waxaa dhageysiga miiska noo soo gala dhagaha dhagaha.
Waxaan ka hadleynaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee Jabra, sameecadaha dhagaha ee 'Elite 75t,' waxaan ku ogaaneynaa falanqeynteena qoto dheer fiidiyow iyo sanduuqyo faahfaahsan Waxaan kuu sheegeynaa wixii waayo aragnimadeenu ahayd iyo hadii ay mudan tahay inaad iibsato samaacadahaas TWS oo inbadan laga hadlay.
Sida munaasabado kale oo badan, waxaan ku haynaa fiidiyoow xagga sare ah kaas oo aad ku bogaadineyso furitaanka, fursadaha qaabeynta iyo dabcan dhammaan faahfaahinta falanqaynta qotada dheer ee sheyga, sidaa darteed waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad fiiriso kahor ama kadib aqrinta falanqayntayada faahfaahsan. Ka faa'iideyso fursad aad ku qorto kanaalkayaga, nooga tag wixii su'aalo ah sanduuqa faallooyinka oo sidaas darteed waad awoodaa inaad naga caawiso inaan sii wadno inaan kuu soo qaadno noocan oo kale ah, Ma ku qanciyeen? waxaad ku iibsan kartaa qiimo aad u xiiso badan oo ku saabsan Amazon.
1 Qalabka iyo qaabeynta: Shaqeynta iyo iska caabinta
2 Astaamaha farsamada iyo dhawaqa
3 Is-maamul iyo heerka isku xirnaanta
4 Tayada maqalka iyo Jabra Sound + app
Qalabka iyo qaabeynta: Shaqeynta iyo iska caabinta
Waxaan ka hadlaynaa TWS dhegaha dhegaha iyadoo leh naqshad aad u kala geddisan, qayb isdaba-joog ah, oo aan ku dheereyn dibedda, taasina waxay ku saleysantahay taageeradooda gebi ahaanba suufka ku dheggan dhegta. Si fiican ayey u habboon yihiin, umana muuqdaan inay ku dhacaan imtixaannadayada isboorti, laakiin tan waa inaad ku wareejiso barkinta ku habboon dhegtaada gaarka ah. Miisaankoodu aad buu u yar yahay, qiyaastii 5,5 garaam oo sameecadda dhagaha ah, oo leh cabbir aad u adag. Xaqiiqdii, marka la eego balaastigga cufan, waxaan xitaa u maleyn karnaa in tayada ay cadaalad tahay, wax aad uga fog xaqiiqda, waxay umuuqataa wax soo saar iska caabin ah tijaabooyinkayaga fudeydkiisana waa la qadarinayaa markaan sii dheereyno isticmaalka.
Miisaanka sanduuqa shit: 35 garaam
Miisaanka sameecadda dhegaha kasta: 5,5 garaam
Cabirka sanduuqa: 62.4 x 19.4 x 16.2 mm
Midabada: Madow, cawl iyo dahab
Sida kiiska, naqshad dherer iyo qaab afar geesle ah leh qaloocyo badan, miisaankeedu waa wadar Gram 35 oo wuxuu leeyahay tilmaamayaal, sidoo kale dekedda USB-C ee dhabarka. Waa iska caabin, taabasho wacan iyo halabuur na siiya dareen tayo leh. Waa inaanan ilaawin in sameecadaha dhagaha la galiyay ay yihiin IP55 la aqoonsan yahay, In kasta oo aysan ahayn kuwa quusin kara, kala soociddani waxay noo dammaanad qaadi doontaa ugu yaraan inaan jimicsi sameyn karno innagoo aan ka baqaynin inaan la xanuunno dhidid ama buufinno goosgoos ah.
Astaamaha farsamada iyo dhawaqa
Waxaan ku bilaabaynaa waxa muhiimka ah, codka, waxaan leenahay xawaare dheereeye 20 Hz ilaa 20 kHz oo loogu talagalay dadka hadlaya markay muusikada garaacayaan iyo 100 Hz ilaa 8 kHz marka laga hadlayo wicitaanada taleefanka. Waayo, waxay na siisaa darawal walba 6mm oo dhegaha dhageysiga ah leh awood ku filan, waxaana la socon doona afar mikrofoonada MEMS taasi waxay naga caawin doontaa inaan siino wicitaano cad. Haddii aad rabto inaad ogaato sida wicitaannada taleefannada loo maqlo, waxaad eegi kartaa fiidiyowga, halkaasoo aan ku sameyno tijaabada makarafoonka, marka la soo koobo se sifiican ayuu u difaacaa oo u wacaa iyaga, isagoo tixgelinaya inay leeyihiin dabeyl, waa wax la aqbali karo.
Annagu ma hayno joojinta buuqa, waxaan leenahay joojinta dhawaaqa dadban oo lagu nafaqeeyo qaabka suufka waxayna taasi ku xirnaan doontaa wax badan sida aan u dhigno. Tan awgeed, sidaan horay u soo sheegnay, waxaan u isticmaalnay suufadooda cabbirro kala duwan leh. Ka noqoshada buuq la'aanta ayaa ah mid guuleysata, waxay muujineysaa inay ka soo shaqeeyeen dhinacan waana in ka badan oo ku filan in lagu maareeyo gaadiidka dadweynaha maalin kasta iyada oo aan lahayn waxyaabo badan.
Is-maamul iyo heerka isku xirnaanta
Sida batteriga, ma hayno xog gaar ah oo ku saabsan mAh oo madax-weyne kasta uu wax ka qabto iyo sidoo kale kiiska qaaska ah ee lacag-bixinta. Haa, waa inaan adkeynaa in salka hoose ee kiiska xukunku uu waafaqsan yahay kan ku-dallaca wireless-ka oo leh heerka Qi. Dhiniciisa, isaguLacag degdeg ah ayaa noo oggolaan doonta 15 daqiiqo illaa 60 daqiiqo oo ismaamul ah, iyadoo qaadan doonta wax ka yar saacad si aan u fulino lacag buuxda.
Memoria hagaagsan: 8 qalab
Baaxadda: qiyaastii 10 mitir
Aqoonsi Bluetooth: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, SPP v1.2
Dhinaceeda, mahadsanid isku xirnaanta Bluetooth 5.0 iyo astaamaha la jaan qaadaya, ismaamulka lagu ballamay ee 7 saacadood ah ayaa si adag loogu dhaqmayaa, oo waxyar ku kala geddisan iyadoo ku xiran mugga ugu badan ee aan qoondeynay
Tayada maqalka iyo Jabra Sound + app
Noocyada noocan ah ee codsiyada, si daacadnimo ah, waxay iila muuqdaan qiimo aad u muhiim ah oo lagu daray. Via Jabra Sound +, oo loo heli karo labadaba macruufka iyo Android, waxaad awoodi doontaa inaad astaamiso waxyaabo badan oo ka mid ah sameecadaha dhagaha oo ka dhigi doona khibradaada mid dhameystiran. Waxaan markaa dhaqaajinaynaa barnaamijka 'HearTrhoug' Si loo yareeyo buuqa dabaysha, dooro kaaliyaha codka, suurtagalnimada inaad ka raadsato dhagaha dhagaha iyo wixii ka sarreeya cusboonaysiinta ayaa laga heli karaa app (fiidiyowgeena waxaad ku arki kartaa ficil ahaan).
Sida codka, Jabra Elite 75t Waxaan la yaabay heerka sare ee mugga la bixiyay, oo si weyn u qariya maqnaanshaha Baaqashada Joogtada ah ee Firfircoon. Si kastaba ha noqotee, baaska ayaa si xad dhaaf ah loogu calaamadeeyay jeclahayga, wax aan ku xallin karno isku dheelitirka barnaamijka. Inta kale ee codadka, waxay umuuqdaan kuwo si wanaagsan loo hagaajiyay waxayna bixiyaan tayo aad ula jaan qaada qiimaha badeecada.
Ugu dambeyntiina, waxaan ka hadlaynaa qiimaha, waxaad ku iibsan kartaa dalabyo qaas ah oo ka socda 129 XNUMX oo ah meelaha caadiga ah ee iibka sida Amazon ama websaydhka Jabra. Waxaad horey u ogtahay inaan marwalba kugula talineyno qiimaha ugu fiican ee lacagta. Xaaladdan oo kale waxaad leedahay sameecado dhegaha waxoogaa sarreeya oo sarreeya iyada oo la tixgelinayo waxqabadka, laakiin leh dammaanad in Jabra ay daryeesho, laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan nooca wax soo saarka. Si kastaba ha noqotee, tixgelinta inta ay ku jiraan suuqa, waxaad dooran kartaa xulashooyin leh qiimo ka fiican lacag ama xitaa la joojiyo buuq firfircoon.
Ku dhejiyay: 27 Maarso 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 26 Maarso 2021
Codsi aad u guuleystey
Naqshadeynta Premium iyo dareenka
Tayo wanaagsan oo maqal ah
Aan lahayn ANC
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Jabra Elite 75t, falanqaynta shey aad u wareegsan